अहिलेको बलिहंग तन्गनाम तिहार दिपावली : इन्दिरा चेमजोङ Global News Nepal
२०७६ कार्तिक १७ गते २०: ३१ मा प्रकाशित
सौल, कार्तिक १७
पहिले परम्परागत देउसिभैलो एकदमै अर्गानिक प्राकृतिक् समानुपातिक हुन्थे। नाचगान निकाल्नलाई धेरै मेहनेत गर्नु पर्दथ्यो। महिना दिन वा पन्ध्र दिन अगाडिदेखि तयारीको लागि जुट्ट्नु पर्दथ्यो र देउसी खेल्दा पनि हामी सबै नेपाली हो भन्ने भावनाले सबैको घर टोलमा सकेसम्म र समयले भ्याएसम्म कही कसैलाइ बिभेद नगरीखेल्ने चलन थियो| कुनै जाति बिशेसको देउसेटोली हुदैन थियो।
प्रबिधिको बिकाससंगै हाम्रो जिवन शैलिमा अवश्य सहज र सजिलो त भएको छ तर ? आधुनिकताले हाम्रो परम्परागत चालनचलन, भेषभुशा भाषा,पुरा लोपाउन्मुख भएको छ |छरछिमेकिसँगको सदभाव र भाइचारालाइ पूर्णरुपमा सागुरो बनाउदै लगेको छ | स्थानियपनमा आधारित गीत संगीत, नाचगान बाजागाजा देखिन्न छोडिएको छ। पहिलेको देउसिभैलोमा भट्याउने विषेश ब्यक्ति हुन्थे जसले बिभिन्न अर्थपूर्ण पौराणिक कथा ब्यथा बोकेको दुःख सुखको कुरा भाषा मिलाएर भन्ने गर्थे र देउसिभैलो हेर्ने र सुन्ने गाउलेहारु एकछिन भए पनि आनन्द लिइ चाड्पर्ब मनाएको महसुस गर्दथे।
अहिलेको नयाँ पुस्तालाइ कसरी भट्याउने? आशिष कसरी दिने केहि थाहा छैन। पुरानो पुस्ताको पौराणिक कथामा आधारित बलिराजाको कथा ब्यथाको देउसिभैलो नयाँ पुस्ताको बेवास्ता र प्रबिधिको बिकासले पुरै बिस्थापित गरी दिएको छ। आफ्नो जातिय सस्था र भाषा सस्कृति जोगाउने नाममा झनै जातिय बिभेद बढेको छ। लिम्बु सस्थाले खेलेको देउसी लिम्बुको घरमा मात्र खेलिन्ने। अरु जातजाती पनि यसरिनै खेलेको देखियो। जबकी पहिले यस्तो थिएन। अहिलेको देउसेटोलीसंग हाम्रो परम्परागत बाजाहरु बासुरी, मादल केहि पनि देख्न पाइन्दैन अहिले बढ्दो शहरिकरण र आधुनिकताले गर्दा आजको नयाँ पुस्ताले बिर्सेर गएको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गर्ने पटाका पडकाउने जस्ता समाजमा बढ्दै गएको गलत परिपाटिले गर्दा बलिहाङ तङ्नाम तिहार ज्यादा भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको छ । हाम्रो परम्परा देखि चल्दै आएको सस्कृतिलाई जोगाइ राख्न रमाइलोको लागि खेलिन्ने देउसिभैलो अहिले पैसा उठाउने कार्यक्रम, योजना (program) जस्तै बनेको छ। उबेल देउसी खेले बापत दिइने दान दक्षिणा गच्छे अनुसार दिइने र देउसिभैलो खेल्नेहरुले आत्माले स्वीकार गरि हासिखुसि लाने दान दक्षिणा अहिले हकाहकी माग्न थालिएको छ। सस्थाको नाममा,बङसजको नाममा,र राजनीति पार्टिको आदी इत्यादि ।
पहिलेनै यो देउसी खेलेको रकमले यो गर्ने र उ गर्ने भनेर कार्य योजना बनाएर आउछन तर उठाएको रकम सही ठाउँमा प्रयोग भए नभएको हेर्ने कुनै निकाय छैन। देउसी अहिले घर घर र गाउमा हैन पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टामा खेल्ल्न थालिएको छ। यसरि प्रबिधिको प्रयोग गरी सबै कुरा सजिलो र सहजता मात्र खोज्दै जाने हो भने ? एक दिन हाम्रो परम्परागत मौलिक सस्कार र सस्कृति पूर्णरुपले बिस्थापित हुन्न भन्न सकिन्न् ।
समय र परिस्थिति अनुसार सस्कार, सस्कृति परिमार्जित हुँदै जानु स्वाभिवक नै हो तर सस्कृतिको हागाबिगा जताततै फैलिए पनि मुल खम्बा र जरा मेटिन्नु हुन्न। अबको देउसिभैलो गीतले सम्पुर्ण नेपालको थरि थरी जातजातिको एकतामा जोड दिदै अझ सामाजिक र सदभावना बढाओस शुभकामना शुभकामना !!